Kedu onye na-enwe mmekọahụting The Foundation award - Ịhụnanya, Mmekọahụ na Intanet
Home Iwu Kedu onye nwere mmekọahụ?
A na-ejikọta ịlụ nwoke na nwoke na nwanyị ma ọ bụ na-enwe mmekọahụ na ibe ha. Ịziga ndị mmadụ na-eme onwe ha ka ọ bụrụ otu n'ime ihe ndị na-eme ka nkà na ụzụ na-enyere ndị na-eto eto aka taa, ma ọ nwere ike iduga na ndị uweojii na-etinye na nchekwa data ha.
Ụmụ agbọghọ na-enwe mmetụta dị ukwuu nke 'omenala' ndị a ma ama nke na-akwalite music na ụmụ nwanyị na-adọrọ adọrọ, na-eyi akpụkpọ ụkwụ agbụ ma na-edo onwe ha n'okpuru n'ụzọ na-akpali agụụ mmekọahụ. Ụmụ nwoke ahụ dị iche iche na-eyiri uwe kwesịrị ekwesị na-eguzo na njedebe nke isi. Otutu umu ndi nwanyi na ndi kpakpando kpakpando nwere uzo nke ha.
Iji smartphones ha, ọtụtụ ndị na-eto eto na-eṅomi ihe oyiyi ndị a dị iche iche ma ziga ha ka ha bụrụ enyi nwoke na-atụ anya ịdọta uche ha. Ụmụ nwoke na-ezigakwa ihe oyiyi efu nke 'ihe ịchọ mma' ha na-atụ anya na ha nwere mmasị na ụmụ agbọghọ ahụ.
Nnyocha ndị e mere na-akọ na ọtụtụ ụmụ okorobịa na-arịọ maka, ma ọ bụ ọbụna na-agba ume, ụmụ agbọghọ na-ezite ha foto dị otú ahụ. Ụmụ okoro na-eto eto gara aga nwere ike ịwapụ Playboy magazin, ihe a na-eme taa bụ ịkọwa foto ụmụ agbọghọ gba ọtọ, karịsịa nke ndị di na nwunye ụlọ akwụkwọ ha.
ụfọdụ ụmụ okorobịa enwere ike ikpebi na ị nwere 'ụmụ foto na-akpali agụụ mmekọahụ' n'ihi na ha nwere onwe ha site na ụmụ nwanyị na-adịghị mma. Otú ọ dị ọtụtụ nkwenye bụ maka ndị okenye. Ndị okenye a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụmụ okorobịa ma gbaa ụmụ agbọghọ ume ka ha zigara ha ndị na-enweghị isi ma ọ bụ ndị gba ọtọ. Ha na-emekarị ka ha na-akparịta ụka na ebe nrụọrụ weebụ na-akpakọrịta na olileanya nke ịzụlite ntụkwasị obi zuru oke na mmekọrịta chiri anya iji mee ka ha nwee ike izute ma nwee mmekọahụ na ha n'enweghị nkwenye ndị nne na nna. N'ọnọdụ dị njọ karị, ha na-eji ha ele ha anya iji were ha dọta ha.
Usoro ntanetị gụnyere ịmepụta ozi nkeonwe site n'aka onye na-eto eto nke ha jirizi mee ihe megide ha, na-eyi egwu na ha na ndị nne na nna ha na-ahụghị ha ọ gwụla ma ha kwetara ka ha soro ha nwee mmekọahụ.
Nnyocha banyere ndị na-emejọ ụmụaka na-ekpughe na ndị agadi a nwere ihe a na-akpọ "mgbagwoju anya." Nke ahụ bụ na ha na-agọnahụ banyere nrụgide nke akparamàgwà ha ma ọ bụ chọọ ịkatọ nwatakịrị ahụ maka ile anya okenye ma na-eme mkpasu iwe.
Mmekọahụ n'okpuru Iwu nke England, Wales & NI Imegwara Porn >>